Ungachinja sei DNS kuvandudza yako internet kubhurawuza | IPhone nhau
Ungachinja sei DNS kuvandudza yako internet kubhurawuza
Nhanho yatinofambisa painternet haingotarisane chete nespeed yedu yechibvumirano. Chokwadi vazhinji venyu hamunzwisise kuti nei muine 100MB (kana ini ndinoisa zvimwe) uye zvakadaro kurodha kwemapeji ewebhu hakumhanye sezvaifanira kunge kuri. Takatokuudza kare maitiro ekuvandudza kubatana kwemidziyo yako kuWiFi network yeimba yako, izvo zvakakosha, asi kune mamwezve akakosha ruzivo anogona kuvandudza kubhurawuza kumhanya, uye panguva ino isu ticha taura nezve imwe yeakanyanya kukosha: DNS. Chii chinonzi DNS? Izvo zvakakosha here kuchinja iyo DNS? Isu tinotsanangura zvese zviri pazasi.
1 DNS mushanduri akakosha
2 Nei uchichinja DNS?
3 Ungachinja sei DNS pane iOS (iPhone uye iPad)
4 Ungachinja sei DNS muOS X
DNS mushanduri akakosha
Kana tikabatana peji yewebhu, semuenzaniso Google, tese tinonyora "www.google.es" kumeso kwekero, zvisinei kero chaiyo yeiyo peji "216.58.210.163". Iyo DNS inoita chaizvo izvo, ivo vari mukutungamira kwekubatanidza domaini rega neayo chaiyo kero, kuitira kuti isu tirege kuziva nemusoro izvo zvisinganzwisisike manhamba akateedzana uye kukwanisa kushandisa avo madomaini, ndiko kuti, mazita emawebhu. Zviri nyore kunzwisisa saka izvo Zvichienderana nekuti DNS server yedu inomhanya zvakadii, tinogona kusvika pamapeji ewebhu atinoda kushanyira pakutanga kana kumashure..
Nei uchichinja DNS?
Wedu internet mupi ane DNS yakagadziriswa nekutadza. Dzimwe nguva iwo maseva akanaka anotipa yakanaka yekubatanidza kumhanya, asi dzimwe nguva kwete. Kana iwe uchifunga kuti ako mapeji anotora nguva yakareba kurodha, iwe unogona kuyedza kushandura wako mupi weDNS kune vamwe vanozivikanwa seakanaka, sengeGoogle's.
Zvakanakisa, chinja iyo DNS yakananga pane iyo routerSaka kuti chero chishandiso chinobatanidza kunetiweki yako chinoshandisa idzi nyowani DNS, asi sevazhinji vanopa "vanogonesa" iyi sarudzo, isu ticha tsanangura maitiro ekuzvichinja kubva pachigadzirwa chaicho.
Ungachinja sei DNS pane iOS (iPhone uye iPad)
Kuti uchinje DNS muIOS unofanira kuenda kuZviisheni zvechigadzirwa, uye muchikamu cheWi-Fi tinya pa "i" kurudyi kwenetiweki yawakabatana. Paunenge uchinge uri mukati meruzivo rwe network, chinja iyo DNS inoonekwa nekumira kune iwo aunoda kuwedzera (Mumuenzaniso wedu ini ndawedzera Google's: 8.8.8.8, 8.8.4.4). Zvakareruka sekudaro.
Ungachinja sei DNS muOS X
PaOS X maitiro acho haana kunanga, asi sezviri nyore. Enda kuSystem Preferences> Network muchikamu chePamberi enda kuDNS tab.
Pazasi pehwindo uchaona "+", tinya pairi uye wedzera iyo DNS yaunoda (mumuenzaniso wedu, zvakare ndasarudza Google. Dzvanya OK uye wozo Nyorera. Mushure memasekondi mashoma zvese zvichagadziriswa zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Ungachinja sei DNS kuvandudza yako internet kubhurawuza
 Omar ♺ (@enjoidesign) akadaro
Uye chii chinonzi domain yekutsvaga? Unoisa "station" asi zvine basa rei?
Pindura kuna ar omar @ (@enjoidesign)
Chii chinoitika patinoisa iyo iPhone 6s uye Samsung Galaxy S7 mumvura?
Musika weakagadziridzwa iPhones achasvikawo kuIndia